Ikhosi yeGalufa yokuRetreat ngePool eBarwon Heads - I-Airbnb
Ikhosi yeGalufa yokuRetreat ngePool eBarwon Heads
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRyanandlilli
Ifakwe kwindawo yeshumi elinesithathu yoLwandle lweGalufa yoQhagamshelwano lweGalufa, isitayile sam sokubuyela ekhaya yeyona ndlela ifanelekileyo yokuphumla kunye nokuphumla ngexesha leholide oyilindileyo. Ngokufikelela kwiikhosi zegalufa ezimbini zobuntshatsheli, ulwandle lwaselwandle kunye nephuli ye-onsite, ikhaya lam likugqumile. Ukulala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6, ikhaya lam liza liphelele linamagumbi okulala amabini abanzi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, izinto zabucala kunye neendawo zokuhlambela ekwabelwana ngazo, kunye neyadi entle eluhlaza ngasemva, indawo yam likhaya elikude nekhaya obulifuna.
Ngokufikelela kwiikhosi zegalufa ezimbini zobuntshatsheli, ulwandle lwaselwandle kunye nephuli ye-onsite, ikhaya lethu likugubungele. Ukulala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6, ikhaya lethu liza liphelele linamagumbi okulala amabini abanzi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, izinto zokuhlamba ekwabelwana ngazo, kunye negadi entle eluhlaza ngasemva, indawo yam likhaya elikude nekhaya obulifuna!
Ikhaya lam elimangalisayo lifumaneka ngokulula nje ngemizuzu esi-8 yokuqhuba ukuya kwilali yeevenkile zaseBarwon, imizuzu engama-20 ukuya kwipaki yeGeelong Adventure kunye nemizuzu engama-20 ukusuka ekuqaleni kwendlela eGreat Ocean. Ikhaya elihle elikwindawo entle, lilungele indawo yokuphumla kunye noxinzelelo olungenaxinzelelo.
Ukungena kwikhaya lam uya kubuliswa ngesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala enekhitshi ebanzi, indawo yokutyela kunye nendawo yokuphumla. Ikhanyiswe ngokuqaqambileyo kwaye iyilwe kakuhle, indawo yam yokuphumla yeyona ndawo ifanelekileyo yokuxhoma emva kosuku olude lokuphonononga indawo. Ukuvula indawo yokonwabisa yangaphandle, igadi yakho yangasemva kwimpelaveki yindawo enkulu yegalufa eluhlaza.
Ikhitshi liqhayisa ngezixhobo zentsimbi engenasici, i-oveni yokupheka, i-oveni, isitya sokuhlamba izitya, indawo eninzi yokugcina kunye nendawo yebhentshi enesisa, ikuvumela ukuba uhende umpheki wakho wangaphakathi. Zonke izinto zesidlo sangokuhlwa, iiglasi kunye nezinto zokusika zinokufumaneka kwiikhabhathi zasekhitshini kwabo bafuna ukupheka, iwayini kunye nokutya kunye neti encomekayo, ikofu, amanzi kunye nesnacks ukuze ukonwabele. Kumsebenzi ohambahambayo, ecaleni kwetafile yokutyela kukho indawo encinci yokusebenza ekhoyo ukuze uyisebenzise.
Ukuya kumagumbi okuhlala, uya kufumana amagumbi amabini okulala afanelekileyo onokukhetha kuwo. Omabini amagumbi okulala afakelwe amashiti asemgangathweni wehotele kunye nelinen, kunye neebhedi ezicwangciswe njengeebhedi ezi-2 zobukhulu bokumkani, okanye ii-singles ezi-4. Amalungiselelo ongezelelweyo okulala anokufumaneka kwigumbi lokuhlala, apho ii-lounges ezimbini ziphindwe kabini njengeebhedi zesofa.
Indawo yangasese esembindini ebonelela ikhaya lam igcwele izinto zangasese ezibalulekileyo kunye neetawuli zomqhaphu ezithambileyo zondwendwe ngalunye. Ukuba ulapha kwishishini okanye ukuhlala ixesha elide, uya kuvuya ukwazi ukuba kukho indawo yokuhlamba iimpahla kunye newasha, isomisi kunye nentsimbi. Izicoci eziyimfuneko nazo zinikiwe.
Ngamafutshane, ikhaya lam liza ne:
- Amagumbi okulala amabini abanzi
- Iibhedi ezimbini ezongezelelweyo zesofa kwigumbi lokuhlala
- Indawo yokuhlamba iimpahla yasekuhlaleni
- I-pool ekwabelwana ngayo kunye nezibonelelo ze-BBQ
-Ikhosi yeGalufa kunye ne-clubhouse
-I-WiFi yasimahla kunye nengenamda
-Umatshini weEspresso kunye neepods zekofu
Iindwendwe zinokufikelela kwikhaya lonke - ubhukisha 'indawo yonke' nto leyo ethetha ukuba ungazenza sekhaya lonke. Ukufikelela ngokulula kwikhaya lam ngepini yomnyango wangaphambili, ikuvumela ukuba uze kwaye uhambe njengoko uthanda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, iiyure ezingama-24 ngosuku.
Akusayi kubakho kutshaya kwindawo yam - nabuphi na ubungqina bokutshaya buya kubangela intlawulo ye-150 yeedola.
Ukongeza, imibuzo yeendwendwe kufuneka ibhekiswe kuthi kuphela. NCEDA UNGANXIBELANI NENDAWO YOKUDLA. Izibonelelo zeendwendwe zikwiyunithi. MUSA UKUZISEBENZISA IITAWULA KWINDAWO YOKUHLAMBISA INDAWO YOKUDLA. Ukuba abasebenzi bendawo ekuchithelwa kuyo iiholide babona nabani na ozincedayo ngeepropati zendawo yokuphumla, kuya kubakho isohlwayo se-$20/itawuli. Izinto eziluncedo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide azibandakanyi i-GYM, ukuba nabani na usebenzisa ijimu indawo yokuchithela iiholide iya kuhlawulisa i-80 yeedola.
Ndiyabulela ukuqonda kwakho kwangaphambili.
55" HDTV ene-I-Apple TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.70 · Izimvo eziyi-133
IYunithi yethu (#39) ibekwe kwiKhosi yeGalufa yoLwandle lwe-13. Ukuhamba nje okufutshane ukuya kwindlu yeklabhu okanye kwindawo ethandekayo yephuli. Ukuba kwiPeninsula yaseBellarine, akukhe kubekho ukunqongophala kokutya okumangalisayo kunye nee-wineries ukujonga. Ukhetho olukhulu luya kucetyiswa kwincwadi yesikhokelo ye-intanethi.
I-Barwon Heads ibekwe kunxweme olusemazantsi e-Bellarine Peninsula kwaye ingaphezulu nje kweyure ukusuka eMelbourne. IBarwon Heads yenye yezona dolophana zidumileyo kunye nezibukekayo zolwandle zaseVictoria. Ilokishi encinci ihlala kunxweme olusentshona loMlambo iBarwon, idume ngokuloba kunye nokuhamba ngesikhephe, ophuma eLake Connewarre kunye nemigxobhozo engqongileyo ukuya emantla.
Umbuki zindwendwe ngu- Ryanandlilli
Ukutyikitya itshekhi kwincwadi kwindawo yokuphumla kunyanzelekile kuzo zonke iindwendwe kunye neendwendwe eziya kwigumbi.
Ukungena kusetyenziswa ikhowudi engenazitshixo ukuze ukhululeke ukuba uzikhangelele emva kwentsimbi yesi-4 emva kwemini ngexesha lakho lokuphumla. Andizubakho ukuze ndikubulise, nangona kunjalo, ndiza kukubonelela ngencwadi yesikhokelo enemiyalelo yokungena, incwadi yendlu kunye neengcebiso zasekhaya malunga nokutya kunye nokuzonwabisa.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye unemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, ndonwabile ngakumbi ukufumana imiyalezo kunye neefowuni.
Ukungena kusetyenziswa ikhowudi engenazitshixo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Connewarre